Sajhasabal.com | Homeमोबाइल हरायो ? मोबाइल १ मिनेटमै यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
के तपाइ मोबाइल हराएर चिन्तित हुनुहुन्छ? यदी त्यसो हो भने अब यसरी १ मिनेटमै पत्ता लगाउनुहोस् तपाँइको मोबाइल कसले लग्यो भनेर। यो जानकारी सबैको लागि निकै नै महत्वपूर्ण रहेको छ किनकी अहिले हाम्रो दैनिक जीवनमा मोबाइल हामीलाई नभइ नहुने चीज जस्तै बनेको छ।
मोबाइल फोन यति धेरै आवश्यक चिज बनिसकेको छ कि थोरैबेर मात्रै आँखाबाट टाढा भयो भने पनि ठूलै समस्या झेल्नुपर्छ । मोबाइल कतिपय समयमा राखेको ठाउँ भूल्न सकिन्छ भने कतिपय समयमा हराउन पनि सक्छ । यदि तपाईंको मोबाइल फोन हरायो भने त्यो अहिले कहाँ छ भन्ने तुरुन्तै आफैँ पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
त्यतिमात्रै कहाँ हो र तपाईंले त्यसलाई लक गरिदिन र त्यहाँ भएका डाटाहरु मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ । तरिका निकै सजिलो छ ।यस्तो सुविधा तपाईंलाई गुगलले दिएको छ ।
यद्यपी आईफोन युजरले भने यो ट्रिकबाट फाइदा लिन सक्दैनन् । तपाई‌ंको फोन अनिवार्य एण्ड्रोइड हुनु जरुरी छ । आईफोन का प्रयोगकर्ताले iCloud को मद्दतमा हराएको डिभाइस खोज्न सक्दछ |